Doorashooyinka Soomaaliya oo wajahaya caqabadaha ugu waa weyn iyo Beesha Caalamka oo laga rajo beelay | BANAADIRSOM
Home Wararka Maanta Doorashooyinka Soomaaliya oo wajahaya caqabadaha ugu waa weyn iyo Beesha Caalamka oo...
Doorashooyinka Soomaaliya oo wajahaya caqabadaha ugu waa weyn iyo Beesha Caalamka oo laga rajo beelay
Doorashooyinka dadban ee soo aadan ee Soomaaliya ayaan wali helin wax maalgelin ah dibada ah, sidda ay illo wareedyo xog-ogaal ah u xaqiijiyeen.
Sida ay muujinayaan warbixinadda, saaxiibadda caalamka ee Soomaaliya ayaa si cad ugu sheegay madaxda Soomaalida in ay ku talagaleen miisaaniyada doorasho toos ah oo dadweynuhu ay caddeeyaan.
“Sidaas darteeda ma hayno qoondo aan ku taageerno doorasho toos ah oo ka qabsoonta Soomaaliya,” ayay diblumaasiyinta ugu sheegeen madaxda Soomaalida mid kamid ah kulamadii u dambeeyay.
Mid kamid ah shirarkaas ayaa, sida ay xoguhu caddeynayaan, waxaa la isla meeldhigay cadadka lacagta ku baxeysa coddeynta, hase ahaatee, wali madaxda Soomaalida ma gaarin kaalmadaas mana kasoo bixin dhanka dowladaha daneeya arrimaha Soomaaliya.
Saddex illo wareed kale oo ku dhow xerada Xalane oo ah fariisinka ugu weyn ee wakiilada Beesha Caalamka ayaa u dusiyey in diblumaasiyiinta ay ka fekerayaan talaabooyinka ay qaadayaan.
Previous articleLionel Messi Oo Afka Furtay Kana Hadlay Ku Guulaysiga Copa America 2021. – banaadirsom
Next articleFarmaajo oo ka hadlay dib u doorashada Abyi Axmad iyo guusha xisbigiisa